Local – 9han News
စားဖူးတယ်ရှိအောင် ကြုံရင် ဝယ်စားကြပါနော် အောင်​ပန်း ​ဈေး​နေ့မှာ ရောင်းတဲ့ မြေကြီး တစ်ဗူးကို ၅၀၀ ပါ
စားဖူးတယ်ရှိအောင် ကြုံရင် ဝယ်စားကြပါနော် အောင်​ပန်း ​ဈေး​နေ့မှာ ရောင်းတဲ့ မြေကြီး တစ်ဗူးကို ၅၀၀ ပါ အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲလာရောင်းတဲ့ မို့အို စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ ပအို့ဝ်​လူမျိုးအ​ခေါ်အ​ဝေါ်က *ဟမ်းတော့*လို့​ခေါ်တယ်​ ​မြေကြီး​တော့ဟုတ်​တယ်​ ရိုးရိုး​​မြေကြီး​တော့ မဟုတ်​ပါဖူ လွယ်​လွယ်​နဲ့ရှာလို့မရပါဘူး ဒီစားလို့​​ရတဲ့​​မြေကြီး​တွေက ​​​နေရာသက်​သက်​ရှိပါတယ်​ များ​သောအားဖြင့်​အဖိုးအဖွား​တွေကြိုက်​ကြတယ်​ အစာ​ပြေ​ပေါ့ ထမင်းစားပြီးရင်​စားကြတာများတယ်​ တချို့ကြ စားတာစွဲသွားရင်​
နတ်တွေခင်းထားတဲ့ နတ်လမ်းရှိတဲ့ ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရေလယ်ဘုရား ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ထူးခြားအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့စေတီပုထိုးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့ အထဲမှာ ယနေ့ မွန်ပြည်နယ်သံဖြူ ဇရပ်မြို့  နယ် ဝဲကလောင်းရွာအနီးက ကျိုက်နဲရေလယ်ဘုရားကို ကံကောင်းစွာ ဖြင့် ဒကာဒကာမတွေ ပို့ ပေးလို့ ဖူးခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။ ဒီကျို
Khin Thuzar isamodern-day Myanmar born with 26 children..
This week, the audience will be presented with an exciting new era of modern life. You can read more below about how she and her husband and 26
A burglar in an old movie theater has been burned and burned
Monywa (20/10/2019) 12:40 am An undercover detective set upastore under the old movie studio, whereaburglary ofathief was set on fire. The fire
If you can’t afford to give your daughteradress and donate 7,000aday
I appreciate the concerted efforts and efforts of the fire brigade community members who helped the Min Min Wan yesterday to break down the monasteries. This is a
There is nowaBuddhist monk who can perform three-dimensional meditation
The Buddha was born in the second month of the reign of King Bhumibol Adulyadej. Tin Saw – Mother Daw Tin – Mother Daw U Khin was born
A bizarre human-like figure appears in the bamboo as it splitsabamboo fire in Sagaing
On the evening of 19-10-2019, evening in the house of the Min Min Wan, Sagaing Division, there wasahuman-shaped bamboo in the bamboo. This morning, the writer
Betting in Falun Village, Yuzana Township
Magway Division Police Arrest Betting in Falun Village, Kyaukphyu Township According to the instructions of Magway Region Chief Minister Dr Aung Moe Nyo, at around2pm today,